सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको के हो? यि युबतिको यस्तो जवाफ...हेर्नुहोस भिडियो सहित -
सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको के हो? यि युबतिको यस्तो जवाफ…हेर्नुहोस भिडियो सहित
कोरोनाको महामारीबाट जनजीवन र अर्थतन्त्र शिथिल बन्न थालेपछि सरकारले विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । तर अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएपनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रले भने तत्कालै गति लिने सम्भावना देखिएको छैन् । बरु लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि निर्माण र प्रदर्शनका क्रममा रहेका चार दजर्नभन्दा बढि चलचित्रहरु हलसम्म पुग्ने स्थिति नहुँदा झण्डै पाँच अर्बको लगानी जोखिममा परेको छ ।
यो काठमाडौं उपत्यकाकाो सबैभन्दा व्यस्त गोपीकृष्ण सिनेमा हल हो। जहाँ एकैपटक चलचित्र प्रदर्शन गर्न मिल्ने सातवटा हलहरु छन् । लकडाउन अघिसम्म एकैपटक नेपालीसँगै बलिउड तथा हलिउडका समेत चलचित्र प्रदर्शन हुने यहाँ अहिले सुनसान छ। यस्तै अबस्था काठमाडौंका सिभिल मल तथा सिटी सेन्टरमा रहेका मल्टिप्लेक्स हलहरुको मात्रै हैन, देशैभरका सिनेमा हलको छ । जसका कारण निर्माणाधिन र प्रदर्शनको तरखरमा रहेका ४० भन्दाबढी चलचित्रहरु थलिएर बसेका छन् । निर्माताहरुका अनुसार एउटा राम्रो फिल्म बनाउन सरदर चार करोडको लगानी हुन्छ । यो स्थिति हेर्दा यि फिल्महरु प्रदर्शनमा आएनन् भने झण्डै एक अर्बको घाटा नेपाली चलचित्र उद्योगले ब्यहोर्न पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिर गरि देशभर दुई सय भन्दा बढी चलचित्र भवनहरु छन् । अहिले ती सबै बन्द छन् । ८५ प्रतिशत सिनेमा घरहरु बैंकको ऋण सञ्चालकहरु बताउँछन् । लकडाउनकै कारण चलचित्र निर्माणमा संलग्न दुइ लाख जना बेरोजगार छन् । बन्द रहेपनि सिनेमा घर सञ्चालकले त्यहाँका कर्मचारीलाई भने तलब दिइरहेका छन् । यो सबै जोड्दा हलहरुले लकडाउनका दुई महिनामा मात्रै करिव ४ अर्बको नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको सञ्चालकहरुको दाबी छ । ठुलो पूर्वाधार सहितका चलचित्र हलहरु बन्द भएपछि निर्माताहरु भने अनलाईन प्लेटफर्मको बैकल्पिक उपायबाट भएपनि सिनेमा प्रदर्शनमा ल्याउने मनस्थितिमा छन् ।
लकडाउन खुकुलो बनाउन थालिएपनि धेरैपछिसम्म असर पुग्ने क्षेत्र चलचित्र उद्योग नै हो । लगानी अनुसारको आम्दानी नहुँने र इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएकोले छिट्टै प्रदर्शन गरेर लगानी उठाउन भने कठिन हुने देखिन्छ । केटाले लुकाएर हिड्ने तर केटीले देखाएर हिड्ने के हो.? हेर्नुहोस भिडियो सहित
← अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस्
नियमित यौ’न स’म्पर्कले गर्दा यति धेरै फाइदा हेर्नुहोस →